- Madaxweyne Georgi Parvanov
- Ra'iisul wasaare Boyko Borisov
- Taariikhda 6 Abriil, 1909
- Total 110,993.6 km2 km²
- Biyo (%) 0.3
- 2016 qiyaas 7,101,859
- Total $0.055.257 Trillion (17th)
- Per capita $10,666 (64nd)
Bulgaria ( Af-Bulgari: България, waa wadan ku yaalo bariga koonfureed ee qaarada Yurub.
Bulgaariya: / bʌlɡɛəriə, bʊl- / (ku dhawaad ​​codka dhageysato); Bulgarian: Baalgariya, tr Bihlgariya), si rasmi ah Jamhuuriyadda Bulgaariya (Bulgarian: Repubblica Búlgariya, IPA: [rɛpublikɐ bɐɫɡarijɐ]), waa a waddanka koonfur bari ee Yurub. Waxaa xuduud u leh dalalka Romania, waqooyiga, Serbia iyo Macedonia, galbeedka, Giriigga iyo Turkiga ee koonfurta, iyo Badda Badda ee Bariga. Magaalada caasimada ah iyo magaalada ugu weyn waa Sofia; magaalooyinka kale ee waaweyn waa Plovdiv, Varna iyo Burgas. Iyada oo leh dhul-dhan 110,994 kilomitir oo isku-wareeg ah (42,855 sq mi), Bulgaariya waa waddanka 16aad ee Europe ugu weyn.
Ururada dhaqameed ee taariikhiga ah waxay bilaabeen inay ka soo baxaan dhulalka hadda jira ee Bulgaariya muddada Neolithic. Taariikhdeedii hore waxay arkeen joogitaanka Thracians, Giriigga Giriigga ah, Faaris, Celts, Rooma iyo kuwo kale. Soo ifbaxa mid ka mid ah dowlad-goboleed mideysan oo reer galbeedka ah ayaa taariikhda dib u bilaabaya aasaasida Boqortooyada Midowgii Boqortooyada ee 681-dii AD, taas oo ay ku badnayd Balkans oo ka shaqeynaysay xarun dhaqameed ee Slavs inta lagu guda jiro qarniyadii dhexe. Iyada oo hoos u dhacday Boqortooyada Badbaadada Badnaanta ee 1396, dhulalkeedii waxay ku hoos jirtay xukumadii Ottoman mudo shan sano ah. Dagaalkii Russo-Turkish ee 1877-78 waxay keeneen dhisitaanka Dowlad Goboleedka Bulgaariya. Sannadaha soo socda waxay arkeen colaado dhowr ah oo ay la galaan deriskooda, taasoo keentay in Bulgaria ay la jaanqaado Jarmalka labada dagaal. Sannadkii 1946-kii waxay noqotay mid ka mid ah xisbiyada siyaasiga ah ee qaybta ka ah ee ka soo jeeda Eastern Bloc ee Soviet-led. Bishii Disember 1989, Xisbiga talada haya ee Xisbiga ayaa u oggolaaday doorashooyin dhinacyo badan, kaas oo markii dambe u horseeday barashada Bulgaariya ee dimuqraaddiyadda iyo dhaqaalaha suuqa.
Bulshada Bulgaria oo ah 7.2 milyan oo qof ayaa inta badan ku badan magaalooyinka waxayna badanaaba ku badan yihiin xarumaha maamulka ee 28 gobol. Inta badan dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo dhaqanka waxay ku yaalaan caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn, Sofia. Qeybaha ugu xooggan dhaqaalaha waa warshad culus, injineernimada tamarta, iyo beeraha, kuwaas oo dhammaantood ku tiirsan ilaha dabiiciga ah ee deegaanka.
↑ 1.0 1.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named WorldBank
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulgaria&oldid=224650"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Nofeembar 2021, marka ee eheed 17:47.